Saturday January 14, 2017 - 11:06:52 in Wararka by Super Admin
Dowlada Mareykanku waxa ay sheegtay in Argagixisada Somalia ee Al-shabaab ay qorsheynayaan in Deegaanada Kenya ay ka geystaan weeraro lixaad leh.
Mareykanku waxa uu sheegay in weeraradaasi ay yihiin kuwo ku fool leh Magaalo xeebeedyada dalka Kenya, oo saldhig u ah dalxiisayaasha.
Xogta weerarkaasi oo ay heshay Safaarada Mareykanka ee magaalada Nairobi, ayaa waxaa looga digay muwaadiniintooda ku dhaqan Kenya, inay tagaan goobaha qaar.
Digniinta Mareykanka ayaa waxaa kamid ah in Al-shabaab ay weeraro ka geysan karto Gobolka Waqooyi bari ee dalka Kenya iyo Magaalada Lamu.
Dhinaca kale, Dowladda Kenya ayaa sidoo kale heegan gelisay ciidanka dowladda Kenya ee ku sugan Magaalo xeebeedyada dalka Kenya.